Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha na mampandeha fampandrenesana ao amin'ny Google Chrome | Androidsis
Ahoana ny famadihana na famonoana ireo fampandrenesana Chrome amin'ny Android
Eder Ferreno | | Fampiharana Android, Tutorials
Google Chrome no navigateur default amin'ny Android, ampiasain'ny ankamaroan'ny mpanjifa miaraka amina telefaona miasa. Rehefa nandeha ny fotoana dia nampidirina ao aminy ny fiasa, toy ny tolo-kevitra na ny mode mainty ho avy tsy ho ela izany. Ny fampandrenesana dia nampidirina tao amin'ny navigateur taona lasa izay. Noho izany, mahazatra ny mpampiasa ny mahita azy ireo matetika.
Na dia mety ilaina amin'ny tranga maro aza ireo fampandrenesana ireo ao amin'ny Chrome, dia mahasosotra azy ireo ny ankamaroan'ny mpampiasa. Raha ny marina dia mirona handà izy ireo rehefa misy tranonkala mangataka azy ireo hampiasa azy ireo. Fa, raha te hampavitrika ianao dia esory izany na tantano tsotra fotsiny amin'izy ireo, asehonay anao eto ambany ny tokony hatao.
Google Chrome dia manana faritra izay afaka mitantana mora foana ireo fampandrenesana ireo izahay. Ka azo atao foana ny manisy fiovana amin'io lafiny io. Fa tsara ny mahafantatra ny fomba fitantanana azy ireo amin'ny Android, hahafantarana izay tokony hatao raha toa ka te hampavitrika na hanafoana ny fampiasan'izy ireo ianao amin'ny fotoana rehetra.
1 Tantano ny fampandrenesana ao amin'ny Google Chrome
2 Alefaso na vonoy ny fampandrenesana ao amin'ny Chrome
Tantano ny fampandrenesana ao amin'ny Google Chrome
Ny zavatra mahazatra indrindra dia rehefa miditra amin'ny pejin-tranonkala isika dia ampahafantarina antsika fa te handefa fampandrenesana fanosehana amin'ny finday Android ny tranonkala. Ity fahazoan-dàlana ity dia matetika aseho amin'ny varavarankely pop-up, izay izahay avelao hanaiky na handà izany fampandrenesana izany fa manolotra antsika izy ireo. Na dia, na inona na inona ataonao, azonao atao foana ny mitantana an'io any aoriana ary manova ny sainao. Tsy olana izany.
Mba hahafahana mitantana azy ireo ao amin'ny Google Chrome, mila tsindrio ireo teboka telo mitsangana eo amin'ny zoro ambony ankavanan'ny efijery. Avy amin'ireo safidy miseho ao amin'ny menio misy ny toe-javatra dia mila tsindrio ny fikiranao. Ao anatin'ny fikirana, mankanesa any faritra antsoina hoe fanamboarana tranokala. Ao no anananao ny fampandrenesana. Azonao atao ny mahita ireo pejy web izay nosakananay ny fampandrenesany na ireo izay nanaiky ny fampandrenesany.
Izany tokoa eto amin'ity pejy ity dia mifehy an'io lafiny io ao amin'ny Google Chrome izahay. Ho hitanao ny lisitr'ireo pejin-tranonkala feno, mizara ho an'ireo izay ekenao sy ireo izay sakananao. Izany rehetra izany dia zavatra azo ovaina amin'ny fotoana rehetra. Satria mety misy tranokala manana ny fampandrenesany tianao hojerena indray na iray izay tsy tianao ho hita.
Alefaso na vonoy ny fampandrenesana ao amin'ny Chrome
Amin'ity lafiny ity, manana safidy roa samihafa isika. Mety mila ianao sakano ireo ao amin'ny pejin-tranonkala manokana, izay nanaiky tamin'ny androny. Raha izany no mitranga dia tsy maintsy tsindrio ny anaran'ny tranokala ao amin'ilay lisitra miseho eo amin'ny efijery. Rehefa manao an'io ianao dia hahazo varavarankely vaovao, ahafahanao misafidy raha te hanaiky ianao na hanakana ny fampandrenesana amin'ny pejin-tranonkala resahina. Amin'ity tranga ity, ny tadiavinay dia ny manakana azy ireo amin'ny Chrome. Noho izany, mifidy sakana amin'ireo safidy ireo izahay.
Na dia manana safidy faharoa amin'ity lafiny ity ao amin'ny Google Chrome aza izahay. Satria ny browser an'ny Android dia manome antsika ny mety tapitra ny fampandrenesana rehetra, fika hafa tsara hivezivezy amin'ny fomba tsara indrindra ao. Midika izany fa tsy misy pejy web afaka mamorona fampandrenesana ao. Safidy somary mahery vaika kokoa io, saingy miasa tanteraka.
Ao amin'ny fizarana fampandrenesana misy antsika dia ho hitanao fa eo an-tampony, ny fizarana voalohany dia antsoina hoe Notification, eo akaikin'ny switch. Ny zavatra mahazatra indrindra dia ny Google Chrome efa nilaza hoe mifamadika, mazàna dia tonga toy izany amin'ny alàlan'ny default. Na dia tsy mila fampandrenesana ao amin'ny browser aza izahay. Noho izany, ny zavatra tsy maintsy ataonao avy eo dia ny hanafoanana azy. Amin'izany fomba izany dia tsy mandeha tanteraka ny fampandrenesana. Tsy hahazo na oviana na oviana ianao.
Raha manova ny hevitrao ianao amin'ny fotoana rehetra, dia azonao atao ny mamadika ilay switch ary tantano amin'ny Chrome tsirairay avy ireo fampandrenesana ireo, mifantina izay pejin-tranonkala tianao ho vitanao ary iza no tsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny famadihana na famonoana ireo fampandrenesana Chrome amin'ny Android
Huawei dia afaka mampihatra teknolojia solika ranoka amin'ny finday ho avy